မလေးရှားပြည်သူများမှ ရခိုင်ဒေသ ဒုက္ခသည်များအတွက် RM ၁၀ သန်းဖိုး ရိက္ခာသင်္ဘောပေးပို့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Rohingya NGO Calls on UN to Push Thein Sein
U Thein Sein would not dare to giveaSELF INCRIMINATING speech at UN to commit the Crimes against Humanity »
“မလေးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ဆန္ဒကတော့ ဘာသာတရားတွေ၊ လူမျိုးတွေမခွဲခြားဘဲ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ နိုင်ငံတွေမှာ ဒုက္ခရောက်နေသာ ပြည်သူများကို ကူညီဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် “လို့ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချူပ် က ဆိုပါတယ်။
“ဒါဟာ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ ပထမအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရော အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအပါအ၀င် သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများက ရန်ပုံငွေတွေစုဆောင်းပြီး ဒီလိုမျိုး အကူအညီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို အစားအသောက်အပြင် အခြား သော ပစ္စည်းတွေပို့စမြဲပါ ” ဟု ဒုတိယ ဝန်ကြီးချူပ် က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခရောက်နေသော ပြည်သူများ၏ ငတ်မွတ်မှု့ကို အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးချူပ် က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
” ဒုက္ခရောက်နေသော ပြည်သူများထံအမှန်တကယ်ရောက်ရှိဖို့ ကတိပေးတဲ့ မြန်မာအစိုးရအားလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်” လို့ ဒုတိယဝန်ကြီးချူပ်က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
“အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေဆီ ပို့ဆောင်ဖို့ စေတနာ့ ၀န်ထမ်းတွေလည်း ပါသွားပါတယ်။ သူတို့ အဲဒီ့မှာ လုပ်အားပေးနေစဉ် ကာလအတွင်း အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံး လုံခြုံမှုရှိစေဖို့လည်း ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်းပေးရမယ်” ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးချူပ်က ဆိုပါတယ်။
“အမှန်တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့မှာ စထွက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် စက်တင်ဘာ (၁၇) ရက်နေ့ မတိုင်ခင်အထိ မြန်မာအာဏာပိုင်များရဲ့ သဘောတူညီမှု့ ကို မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒီ့ ဒေသမှာ ရှိတဲ့ပြည်သူတွေဆီကို အစားအသောက်ရယ်၊ အ၀တ်အစားရယ် ၊ ဆေးဝါးရယ် ပေးချင်တာပါ။ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရယ် ကလေးတွေရယ်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုပါ။” လို့ Abdul Azeez က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ သင်္ဘောဆိုက်ရောက်ခွင့် ပြုလိုက်သဖြင့် စိတ်သက်သာရာ ရသွားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Tags: Abdul Azeez, Asia, Kuala Lumpur, Malay styles and titles, Malaysia, Muhyiddin Yassin, Sinar, Sinar Bima
This entry was posted on September 27, 2012 at 1:41 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.